China TOA130 uhlobo ovulekile weld ikhanda ifektri kanye nabaphakeli | I-AEON
I-TOA130 imodeli eyodwa yochungechunge lwe-TOA Open Type Weld Heads. Imboza ububanzi bepayipi le-OD kusuka ku-38.1mm - 130mm. Amakhanda wokushisela wohlobo oluvulekile akhuleliswa njengethuluzi lokushisela i-orbital TIG ngentambo noma ngaphandle kwentambo yokugcwalisa. Amakhanda we-TOA ochungechunge lwe-weld anomsebenzi we-AVC / OSC futhi avame ukusetshenziselwa ipayipi elincane (3mm - 16mm) kumbhobho / endololwaneni / ekushiseni kwe-flange. Ububanzi bamashubhu azofakwa buhlanganisa ububanzi obusukela ku-38.1 mm kuze kufike ku-130 mm.
Precision, ukuzinza okuzinzile futhi okuhlala isikhathi eside;
Easy ngocingo on ipayipi nge high uvala concentric;
Ukuhamba nge-AVC nokusebenza kwe-OSC;
Ukulawulwa kokudla kokunemba okuqondile;
Welding onguchwepheshe obukhulu odongeni ipayipi Welding;
Isifunda sokupholisa uketshezi;
Amakhanda e-TOA Open weld akhulelwa njengethuluzi lokushisela i-orbital TIG ngocingo noma ngaphandle kwentambo yokugcwalisa. Ububanzi bamashubhu azofakwa amboze ububanzi obusuka ku-19.05 mm kuye ku-324 mm (ANSI 3/4 "kuye ku-12 3/4"). Amakhanda e-weld type avulekile afakwe isibani se-TIG nge-diffuser yegesi. Ukuvikelwa okwanele kwegesi kutholakala kuphela endaweni ezungeze ithoshi embozwe yigesi evikelayo ephuma ngaphandle kwelensi yegesi. Ngesikhathi senqubo yokushisela, i-arc ingabukwa futhi ilawulwe ngqo yi-opharetha.
Ipayipi le-TOA kwipayipi le-weld weld liyindlela yokwakhiwa kwe-caliper, kulula kakhulu ukucindezela ipayipi, futhi futhi kulula ukuyilungisa ngobubanzi obuhlukile. I-caliper ifaka ipayipi ebusweni ukuqinisekisa ukugxila phakathi kwepayipi namakhanda we-welding ku-welding. Ikhanda le-TOA weld linemisebenzi ye-AVC ne-OSC ukuze ihambisane nodonga olunzima CS, SS nokunye okokusebenza, bayabona inqubo yokushisela enamazinga amaningi. I-wire feeder yekhanda le-TOA Welding futhi linomklamo we-loop control ukunemba isivinini sokudla kwentambo, ucingo lokudlisa akukho mklamo we-twist ukuthola ukuzondla kwentambo okuzinzile ukuthola umumo omuhle ngemuva kokushisela. Ikhanda le-TOA Welding lingasetshenziswa ngaphansi kokuhlanganiswa noma ukondliwa ngocingo, lisetshenziswa kabanzi kwipayipi kwipayipi nepayipi ukulinganisa. Futhi, ukupholisa Liquid kuqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo isikhathi eside
38.1 - φ 130
Insimbi yeCarbon / Insimbi engagqwali
Standard 3.2 ejwayelekile
Isivinini Sokujikeleza (ngomzuzu)
I-OSC stroke (mm)
1800 mm / iminithi
Langaphambilini TOA77 uhlobo ovulekile weld ikhanda
Olandelayo: TOA180 uhlobo ovulekile weld ikhanda
TOA77 uhlobo ovulekile weld ikhanda
TOA180 uhlobo ovulekile weld ikhanda
TOA230 uhlobo ovulekile weld ikhanda
TOA320 uhlobo ovulekile weld ikhanda